कमल थापालाई अर्को धक्का, कोमल वली एमालेमा जाने पक्का ! - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
कमल थापालाई अर्को धक्का, कोमल वली एमालेमा जाने पक्का !
प्रकाशित: ७ आश्विन २०७४, शनिबार
असोज ७, काठमाडौं । राप्रपाको केन्द्रीय सदस्य गायिका कोमल वली नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने पक्का भएको छ। राप्रपाको निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य रहेकी कोमल सोमबार अध्यक्ष केपी ओलीका हातबाट टीका लगाएर एमालेमा प्रवेश गर्न लागेकी हुन् ।
राप्रपाको शक्ति कमजोर भएपछि कोमल वलीले त्यहाँबाट आफ्नो भविश्यको सम्भावना नदेखेपछि एमालेमा प्रवेश गर्न लागेकी हुन् । रेडियो नेपालको जागिर छाडेर पूर्णकालीन राजनीतिमा संलग्न भइसकेकी कोमल ओलीलाई एमाले प्रवेश गराउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैं दाङ जाने भएका छन् ।
राप्रपामा केन्द्रीय सदस्य जितेर पनि जिम्मेवारीविहीन बनाइएको गुनासो गर्दै एमालेमा प्रवेश गर्न लागेकी ओलीले पार्टीमा पाइने जिम्मेवारीका बारेमा समेत नेताहरुसँग छलफल गरेको बताइएको छ ।